ဆာနေကြသူများ – My Blog
အစများ၏ အစမှ စရမည်ဆိုလျင်တော့ မိုးဆွေ၏ ဒေါ်လေးဖြစ်သူ အန်တီမိုးက စရမည်ထင်သည်။ အန်တီမိုးက တစ်ခုလပ်မလေး ဖြစ်သည်။ သမီးလေး တယောက်ရှိသည်။ သမီးလေးပင် ဆယ်တန်းအောင်၍ တက္ကသိုလ်အဝေးသင် တက်နေပြီဖြစ်ရာ အန်တီမိုးအသက်မှာလည်း လေးဆယ်ပင် စွန်းနေပြီ ဖြစ်သည်။ အန်တီမိုးက နေ့ခင်းဘက်တွင် ရုံးသွားတတ်ပြီး ညကျလျင်တော့ သူတို့အား ဂိုက်သဘောမျိုး စာသင်ပေးတတ်သည်။ ညဂိုက်များမတိုင်မီလည်း အန်တီမိုးက အပြင်တွင် ဂိုက်လိုက်ပြသည်။ ထိုဂိုက်များပြီးမှ အိမ်ပြန်လာပြီး သူတို့အား စာသင်ပေးသည်။ သူတို့ဆိုသည့် ဂိုက်လိုက်သူများမှာ မိုးဆွေနှင့်အတူ မိုးဆွေ၏ အစ်မရူပါခင်၊ တင်ထွန်းနှင့် တင်ထွန်း၏ ညီမလေး နှင်းသူဇာခင်၊ တင်စိုး၊ ဇော်ထက်နှင့် မိန်းကလေး သုံးယောက်ပါသည်။ မိန်းကလေး သုံးယောက်မှာ အိမ်နီးချင်းမှ သင်းသင်းချို၊ မိုးမိုးဆောင်းနှင့် ပိုပိုခင်တို့ဖြစ်သည်။ အန်တီမိုးအား အစဦးဆုံး သံသယဝင်ခဲ့သူမှာ တင်ထွန်းဖြစ်သည်။
သူက အန်တီမိုး စာလိုက်ပြပေးသည်ဆိုသော အိမ်ကို သူသတိထားမိလိုက်သည်မှာ ကျောင်းသား မရှိခြင်းက စသည်။ ထို့ကြောင့် တင်ထွန်းက အန်တီမိုးသွားသော ပထမဆုံး ဦးပိုင်အောင်ဆိုသည့် အိမ်ကို ခိုးဝင်ကာ စချောင်းသည်။ အန်တီမိုးသည် ဦးပိုင်အောင် အိမ်ထဲဝင်ပြီးနောက် အိပ်ခန်းထဲ တိုက်ရိုက်ဝင်သည်။ အိပ်ခန်းထဲရောက်သော် အပေါ် အကျႌများကို ချွတ်လိုက်သည်။ ဦးပိုင်အောင်က ခွေးလည်ပတ်အနီရောင်လေး ယူလာသည်။ အန်တီမိုး လည်ပင်းတွင် ပတ်လိုက်သည်။ အန်တီမိုးက ထမိန်လည်း ချွတ်ချလိုက်သည်။ အန်တီမိုးက ခွေးလည်ပတ်ဖြင့် မတ်တပ်ရပ်သည်။ ဦးပိုင်အောင်က ခွေးလည်ပတ်မှ သံကြိုးကို ဆွဲကာ အန်တီမိုးနို့ကို ကိုင်သည်။ အန်တီမိုးက ကြည့်နေသည်။ နို့များကိုင်ပြီးနောက် နံရံကိုလှည့်၍ ကုန်းပေးသည်။ ဦးပိုင်အောင်က အန်တီမိုးအိုးကို ကိုင်ကစားသည်။ ပြီးလျင် အောက်ကနေ ပင့်ရိုက်သည်။ အန်တီမိုးက နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်သည်။
ဦးပိုင်အောင်က အန်တီမိုးအိုးကို ရိုက်ရင်း အနီးဆွဲကာ နမ်းသည်။ နွုတ်ခမ်းချင်း စုပ်သည်။ ထို့နောက် ဘော်လီကို ချွတ်ကာ နို့ကို ကစားသည်။ အရပ်လိုက်ပင် အန်တီမိုးနို့ကို လျှာဖြင့် လျက်သည်။ စုပ်သည်။ ထို့နောက် အန်တီမိုး ချိုင်းကြားကို လျက်သည်။ အန်တီမိုးက လက်ညိုးလေးကိုက်ရင်း ဦးပိုင်အောင် လုပ်သမျ ခံနေသည်။ ဦးပိုင်အောင်က ဖက်ကာ ရင်ခွင်ထဲထည့်ထားသည်။ ခဏနေ ဦးပိုင်အောင်က စားပွဲပေါ် လက်ထောက် ကုန်းခိုင်းသည်။ အန်တီမိုးက ကား၍ ကုန်းပေးသည်။ ဦးပိုင်အောင်က လည်ပတ်မှ သံကြိုးကို ဆွဲရင်း အန်တီမိုးကိုယ်တိုင် ဖင်ဖြဲခိုင်းသည်။ အန်တီမိုးက ဖင်ဖြဲ၍ ကုန်းနေသည်။ ဦးပိုင်အောင်က အန်တီမိုး ဖြဲပြထားသော ဖင်ကို နောက်ကနေ ဇိမ်ခံ၍ ကြည့်သည်။ နောက် အန်တီမိုးကို ကုတင်ပေါ် အိပ်ခိုင်းသည်။ အန်တီမိုးပေါ် စီးမိုး၍ ဦးပိုင်အောင်က တက်ခွသည်။ အန်တီမိုးက နို့နှစ်လုံးကို ပူးပေးသည်။ ဦးပိုင်အောင်က အန်တီမိုးနို့နှစ်လုံးကြားကို စလိုးသည်။
ဦးပိုင်အောင်က ဖြည်းဖြည်းချင်း နို့ကြားကို လိုးသည်။ အန်တီမိုးက နို့နှစ်လုံးကို ပူးထားပေးရင်း ဖီးလ်တက်နေသည်။ ဦးပိုင်အောင်က နို့သီးများကို လီးဖြင့် တို့ကစားသည်။ ဖိကစားသည်။ ခဏနေ ဦးပိုင်အောင် မလိုးတော့ဘဲ ရပ်တော့ အန်တီမိုးက နို့ဖြင့် လီးကို ကွင်းတိုက်ပေးသည်။ လီးထိပ်ကို နို့ဖြင့် ဖိသည်။ လီးထိပ်နဲ့ နို့သီးခေါင်းကို ပွတ်သည်။ ဦးပိုင်အောင်က အသာထလိုက်သည်။ အန်တီမိုးလည်း လိုက်ထပြီး လီးကို စစုပ်သည်။ လီးကို အရင်းက ကိုင်၍ ထိပ်ကနေ စ၍ တဝက်လောက်ကို အေးဆေးပင် စုပ်သည်။ တင်ထွန်းသည် ချောင်းရင်း လီးပင်တော်တော်တောင်နေသည်။ သို့သော်လည်း တိတ်တိတ်လေး လီးကို အသာကွင်းတိုက်၍သာ ကြည့်နေရသည်။ အန်တီမိုးက လီးကိုကိုင်နေရာမှ မကိုင်တော့ဘဲ ပါးစပ်ဖြင့် မလွတ်စတမ်း ငုံကာ နို့ကို ပွတ်သပ်ကစားနေသည်။ တင်ထွန်းမှာ ဦးပိုင်အောင် နေရာပြေးဝင်ယူလိုက်ချင်စိတ် အတော်ကလေးပင် ပေါက်နေသည်။
အန်တီမိုးက လီးကို လက်ဖြင့် ကွင်းတိုက်ရင်း တဖက်က နို့ကို ကစားသည်။ ဦးပိုင်အောင်ကို မော့ကြည့်ရင်း ရယ်မောကာ စကားပြောနေသည်။ ဘာပြောနေသည်ကိုတော့ မကြားရ။ ခဏနေ အန်တီမိုးက လီးကိုကိုင်ရင်း ပါးစပ်ဖြင့် စုပ်၍ ကစားပြန်သည်။ နေရင်း လီးအစုပ်လိုက် ကွင်းတိုက်ပေးသည်။ အတော်ကြာတော့ အန်တီမိုးက လရည်များကို လက်ဝါးပေါ် ထွေးချသည်။ ပြီးလျင် တစ်ရွူးယူ၍ တစ်ရွူးပေါ် ထွေးချသည်။ နွုတ်ခမ်းကို သုတ်သည်။ ခွေးလည်ပတ်ဖြုတ်၍ အဝတ်အစားများ ပြန်ဝတ်သည်။ ထို့နောက် အလှပြင်ကာ ခဏနား၍ နာရီကြည့်ရင်း ထွက်သွားသည်။ တင်ထွန်းလည်း အသာလစ်ထွက်လာခဲ့သည်။ သေချာသည်ကတော့ နောက်တစ်အိမ်လည်း ကျောင်းသား မရှိသည်ကို တင်ထွန်းကောင်းကောင်းသိထားရာ ဤကိစ္စမျိုးပင် ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု တထစ်ချ ယုံကြည်လိုက်သည်။ “ဆရာမ ဦးပိုင်အောင် အိမ်မှာ စာသင်ပုံကို ကျနော်တွေ့ခဲ့တယ် ဆရာမ၊ ဦးသက်ထွေးအိမ်မှာကော ဆရာမ ဘယ်လို သင်တာလဲဟင်”။
ကျူရှင်များမှ အပြန် ရေချိုးလိုက်သော အန်တီမိုးအား လူလစ်ချိန်၌ တင်ထွန်းက အသာကပ်မေးလိုက်သည်။ အန်တီမိုးက နည်းနည်းလန့်သွားပုံရသည်။ ထို့နောက် သူ့အား တိုးတိုးတိတ်တိတ် နေရန် လက်ညိုးကို နွုတ်ခမ်းဖျားပေါ်တင်၍ ပြောသည်။ တင်ထွန်းက အန်တီမိုးနားကပ်သွား၍ အိုးကို အသာဆုပ်ကိုင်ထားသည်။ “မမ မနက်ဖန် ရှောင်တခင်ခွင့်တိုင်မယ်မဟုတ်လား၊ ကျနော်လည်း ကျောင်းပျက်ခွင့် တိုင်ရမယ်ထင်တယ်၊ ပေါင်ကြားထဲက ပစ္စည်းတွေ နေမကောင်းတော့ဘူးနော် မမ” “သူများကိုတော့ မပြောပါနဲ့ကွယ်နော် မောင်လေး သဘောအတိုင်းပါ” နောက်ရက်တွင် အန်တီမိုးက ရှောင်တခင် ခွင့်တိုင်သည်။ တင်ထွန်းလည်း ကျောင်းခွင့်တိုက်သည်။ ကိုးနာရီထိုးသော် တင်ထွန်းက အန်တီမိုးအိမ်သို့ အသာလေး လစ်ထွက်လာခဲ့သည်။ မိုးဆွေနှင့် မိုးဆွေအစ်မ ရူပါခင် ကလည်း ကျောင်းသွားပြီ။ အန်တီမိုးသမီးကလည်း အဝေးမှာ တက္ကသိုလ်တက်နေသည်။ သူကလည်း သူဇာခင်ကို ခွင့်တိုင်ခိုင်းထားသည်။
အမေ့ကို မပြောရန်လည်း မုန့်ဖိုးပိုပေးရသည်။ တင်စိုးနှင့် ဇော်ထက်ကတော့ ညနေမှ လာတတ်သည်။ သင်းသင်းချို မိုးမိုးဆောင်းနှင့် ပိုပိုခင်တို့လည်း ညနေမှ လာသည်။ အန်တီမိုးအမည်ရင်းမှာ မိုးမိုးရီဖြစ်သည်။ အသက်ကြီး၍ အန်တီမိုးဟု ခေါ်ကြခြင်းဖြစ်သလို သူတို့ကတော့ စာသင်ပေး၍ ဆရာမဟု ခေါ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ မိုးမိုးရီသည် သမီးလေး ပိုးဥ လေးတန်းအရွယ်တွင် အိမ်ထောင် ကွဲသွားသည်။ မိမိ၏ ရုံးလုပ်ငန်းဖြင့်လည်းကောင်း ကျန်ရှိနေသော စည်းစိမ်များဖြင့်လည်းကောင်း သမီးလေးကို ကျောင်းထားနိုင်နေသော်လည်း သမီးလေး ကိုးတန်းတက်တော့ ငွေရေးကြေးရေးက ကြပ်တည်းလာသည်။ “မိုးမိုးရီ” တနေ့တော့ လမ်းမှာ လူတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံသည်။ “အယ် နင်သက်ထွေးမလား” “နင် ဘယ်မှာနေတာလဲ ခု” “ငါ ကွက်သစ် လေး မှာနေတာ၊ နင်ကော” “ငါကလည်း ကွက်သစ်မှာပဲဟ ငါက ခြောက် မှာနေတာ” “နင် အိမ်ထောင်ကျပြီပေါ့ ခု” “အင်းပေါ့ဟ နင်ကော”။
“အင်း ဒါပေမယ့် ခုတော့ အတူမနေဖြစ်တော့ပါဘူးဟာ” “ဘာဖြစ်လို့လဲ ငါ့ကြောင့်များလား” “အိုး” သက်ထွေးက ငါ့ကြောင့်များလားဟု ပြောသဖြင့် မိုးမိုးရီက ရှက်သလို ဖြစ်သွားသည်။ မှန်ပါသည်။ မိုးမိုးရီနှင့် သက်ထွေးတို့သည် တက္ကသိုလ်တွင် အတော်နာမည်ကြီးသည့် စုံတွဲဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ်ယောက် အရမ်းလည်း ချစ်ကြသည်။ ထို့အတူ သူတို့ ဖွင့်ဆိုသည့် အရမ်းချစ်ကြသည် ဆိုသည့် အဓိပ္ပါယ်မှာ စိတ်တိုင်းကျ လိုးဖြစ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်စတက်ပြီး မကြာမီ မိုးမိုးရီတယောက် သက်ထွေးနဲ့တွေ့သည်။ ချစ်သူ သက်တမ်း တစ်လလောက် အကြာတွင် သူတို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချစ်နေကြပြီ ဖြစ်သည်။ “စတာပါဟ ငါလည်း အိမ်ထောင်ရေး သိပ်အဆင်မပြေဘူး၊ ခု သားတယောက်နဲ့ ဗျာများနေရတာပေါ့၊ သားကလည်း ကိုးတန်းဆိုတော့လေ” “ဟုတ်လား ကျမသမီးလည်း ကိုးတန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့် တော်တော်ရုန်းကန်ရတာကိုးရှင့်” “ဟုတ်ပဗျာ” “အင်း ကျမလည်း သမီးကျူရှင်ကြေးနဲ့ နစ်နေတာပါပဲရှင် ခုတောင် မပေးဖြစ်တာ သုံးလရှိပြီ”။
စကားပြောဖြစ်ရင်း အတူ လက်ဘက်ရည် သောက်ဖြစ်ကြသည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ သက်ထွေးက သူ့သားအား အချိန်ပို စာလာသင်ပေးနိုင်လျင် သမီးကျောင်းစရိတ်လေးကို ထောက်ပံ့ပေးမည်ဟု ပြောလာသည်။ သက်ထွေး အကြည့်များ မရိုးသားသည်ကို သိသော်လည်း နောက်တစ်လဆိုလျင် သမီးကို ကျူရှင်မှ ထုတ်ရကိန်း မြင်နေသဖြင့် လက်ခံလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် နောက်နေ့ ညနေခင်း ရုံးဆင်းချိန်၌ သက်ထွေး၏ သားကို ကျူရှင်ပြရန် ကွက်သစ်ရပ် ခြောက် ရပ်ကွက်ထဲ ဝင်ပြီး သက်ထွေးအိမ်ကို ရှာလိုက်တော့ အလွယ်တကူပင် တွေ့သည်။ အိမ်ထဲရောက်တော့ သက်ထွေး၏ သားဆိုသူ မရှိ။ “ဘယ်မှာလဲ နင့်သား” “ဘယ်လို ခေါ်လိုက်တာလဲ မိုးရယ် အရင်လို ကိုလို့ ခေါ်ပါလား” တံခါးဝတွင် ရပ်နေသော သူမကို သက်ထွေးက လာဖက်သည်။ ယောက်ျားနဲ့ ကွဲကွာနေသည်မှာ ငါးနှစ်ကျော်လာပြီ ဖြစ်သဖြင့် သွေးသားဆန္ဒကတော့ နည်းနည်းပြင်းပြပါသည်။
သို့သော်လည်း ခုလိုတော့ မဖြစ်ချင်ပြန်ပါ။ “အို မကောင်းပါဘူး ရှင်” သက်ထွေးက သူမ စကားကို နားမထောင်ဘဲ သူမနို့ကို နှိုက်ရင်း သူမကို နမ်းသည်။ သူမ မေးစေ့ကို ကိုင်၍ သူမမျက်နှာကို ကြည့်သည်။ နင် ခုထိ ချောနေတုန်းပဲဟာ ဟုပြောသည်။ နောက် နို့ကို နှိုက်သည်။ သူမနို့ကို ဖော်၍ နို့ကို စို့သည်။ “လွမ်းလိုက်တာ” နို့ကို စို့ရင်း သက်ထွေးက ပြောသည်။ မိုးမိုးရီက မျက်နှာနည်းနည်းပျက်ချင် သလို ဖြစ်နေသည်။ သက်ထွေးက သူမကို အခန်းထဲ ဖက်ခေါ်သွားသည်။ အိပ်ယာပေါ် တွန်းချသည်။ သူမ အသာအိပ်လိုက်သည်။ သက်ထွေးက သူမထမိန်ကို ဆွဲချွတ်၍ သူမပင်တီကို ကစားသည်။ သူမအဖုတ်ကို ပင်တီပေါ်ကနေ ပွတ်သည်။ “ဒီနေရာ ပိုလွမ်းနေတာ မသိဘူးလား မိုးရယ်” သက်ထွေးက ပြောလည်းပြော အဖုတ်အက်ကြောင်းကိုလည်း လက်ညိုးဖြင့် ဖိကစားသည်။ သူမ ပေါင်များ တုန်လာသည်။ သက်ထွေးကလည်း သူမဖီးလ်လာနေသည်ကို သိသဖြင့် စောက်စေ့ရှိရာကို ခန့်မှန်းနှိုက်သည်။
ပြီးနောက် အပေါ်တက်လာကာ သူမဆံပင်များ သပ်တင်သည်။ နို့သီးကို ကိုင်၍ နားရွက်ကို နမ်းသည်။ အရင်တုန်းက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘဝတွင် သက်ထွေးက သူမအား နှစ်ချီလောက် လိုးလိုက်လျင် သူမမှာ မျော့နေတတ်သည်။ ထိုအခါမျိုးတွင် သက်ထွေးက သူမနားရွက်ကို နမ်းပြီး စိတ်ပြန်ဆွတတ်သည်။ ခုလည်း သူမ စိတ်မလာမည်စိုး၍ သူမနားရွက်ကို စုပ်နမ်းသည်။ “ကို့အကြိုက်လေး မနေပေးချင်ဘူးလား မိုးရယ်” မိုးမိုးရီက အလိုက်တသိပင် လေးဖက်ထောက် ကုန်းလိုက်သည်။ သက်ထွေးက နောက်ကနေ အဖုတ်ကို လျက်သည်။ ထို့နောက် သက်ထွေးက ပက်လက်အိပ်သည်။ သူမလီးကို စုပ်သည်။ အပြန်အလန် လီးစုပ်လိုက် အဖုတ်ယက်လိုက် လုပ်ပြီးနောက် သက်ထွေးက သူမကို အပေါ်ကနေ အရင်ဆောင့်ချခိုင်းသည်။ သူမလည်း အပေါ်ကနေ အရင်ဆောင့်ချသည်။ ထို့နောက် သက်ထွေးက သူမလက်ကို ဆွဲ၍ ပေါင်ကိုဆွဲကားပြီး လိုးသည်။ သက်ထွေးနှင့် သူမတို့ အလွမ်းပြေ နှစ်ချီလောက် လိုးဖြစ်ကြသည်။
ထို့နောက် သူမ အလှနည်းနည်းပါးပါး ပြန်ပြင်သည်။ သက်ထွေးက သူမကို ပိုက်ဆံ နှစ်သိန်း ထုတ်ပေးသည်။ “အို ရပါတယ်” “နင် တမျိုးတော့ မထင်စေချင်ပါဘူး၊ ဒါက သူငယ်ချင်းချင်း ကူညီတယ်လို့ပဲ ယူဆစေချင်တယ်” မိုးမိုးရီမှာ ငွေလိုနေသည် ဖြစ်ရာ မငြင်းတော့ဘဲ ငွေကို အိပ်ထဲကောက်ထည့်လိုက်သည်။ “နင် ဘာလို့ အိမ်ထောင်ကွဲတာလဲဟင်” “အဟဲ” သက်ထွေးက ရယ်သည်။ “နင် အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်လို့ မဟုတ်လား” “မဖောက်ပြန်ပါဘူးကွာ၊ ငါ့မိန်းမက ငါ့ကို သိပ်မပေးနိုင်လို့ ငါလည်း ဆာတဲ့အချိန် အိမ်ဖော်ကို ခေါ်ခေါ်လိုးတာ မိသွားလို့ပါဟ” “ငါ သိတယ် တက္ကသိုလ်တုန်းကလည်း ငါ့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ငါသိပါတယ်” “အာ ဟုတ်လား ဟား ဟား ဟား ခုတော့လည်း အဲဒါက ရယ်စရာပါကွာ” ဤသို့ဖြင့် သူမသည် ငွေလိုတိုင်း သက်ထွေးထံသွား၍ သက်ထွေးအလိုကို လိုက်ပေးခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း သက်ထွေးက ပိုင်အောင်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးသည်။
နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်းသည်။ ကိုပိုင်အောင်က သူမကို ကာမသက်သက်ဖြင့် ခေါ်သည်မဟုတ်ဘဲ စိတ်ရိုင်းကို အာသာဖြေချင်၍ ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုပိုင်အောင်က လိုးလေ့မရှိ။ နွုတ်ခမ်းချင်းစုပ်၍ ဖိပွတ်သပ်တာမျိုး၊ အဖုတ်ကို ကလိတာမျိုး၊ လီးစုပ်ခိုင်းတာမျိုးကိုသာ အများအားဖြင့် ပြုလုပ်တတ်သည်။ သို့သော်လည်း သူမအတွက်တော့ ငွေရေးကြေးရေး နည်းနည်းအဆင်ပြေလာသည်။ ထိုစဉ် ကျောင်းနှင့် နီးသည်ဆိုပြီးသကာလ မိမိမှာလည်း ကျူရှင်ပြနေသည်ဟု ကြားထားသူ ဆွေမျိုးဉာတိများက တူလေးနှင့် တူမလေး နှစ်ယောက်ပို့လိုက်သည်။ ထိုတွင် ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လိုကြားမှန်း မသိ။ ဘေးအိမ်မှလည်း ကျူရှင်လိုလို အချိန်ပိုလိုလိုဖြင့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ ရောက်လာသည်။ သူမမှာ ငွေရေးကြေးရေးကလေး နည်းနည်းပါးပါး အဆင်ပြေလာသဖြင့် သမီးဖြစ်သူကို အဝေးပို့ထားရာ မိမိလုပ်ရပ်ကို မသိနိုင်ဘဲ ရှိနေစဉ် တင်ထွန်းဆိုသည့် ခပ်စွာစွာကျောင်းသားလေးက သိသွားသည်။
ခုတော့ သူမ ခွင့်ယူ၍ ချန်နေခဲ့ရလေပြီ။ အားလုံးကျောင်းသွားပြီးနောက် တင်ထွန်းရောက်လာသည်။ သူမ မသိချင်ယောင်နေရင်း အိမ်အလုပ်များကို လုပ်နေသည်။ တင်ထွန်းက သူမကို ဖက်ကာ ဧည့်ခန်းရှိဆိုဖာပေါ် ပစ်တင်သည်။ “အိုး မကြမ်းနဲ့” သူမ ပြောသည်။ တင်ထွန်းက သူမကို သိမ်းဖက်ကာ ပါးကို နမ်းသည်။ ရုတ်တရက်ဆိုတော့ သူမက ရှောင်သည်။ “ဖြေးဖြေး” သို့သော် တင်ထွန်းက အတင်းနမ်းသည်။ သူမက ရှောင်သည်။ သို့သော် မရ။ တင်ထွန်းက သူမနွုတ်ခမ်းကို အတင်းစုပ်သည်။ သူမ ပေါင်ကြားကို အတင်းနှိုက်သည်။ သူမရှောင်တော့ ကြမ်းပြင်ပေါ် လဲကျသည်။ တင်ထွန်းက အောက်ကြမ်းပြင်ပေါ် လိုက်အိပ်၍ သူမထမီကို ပင့်သည်။ သူမ ပင်တီလေး ပေါ်လာသည်။ တင်ထွန်းက အပေါ်ကနေ အတင်းစုပ်သည်။ သူမက တင်ထွန်းခေါင်းကို တွန်းသည်။ တင်ထွန်းက သူမပင်တီကို ဆွဲချွတ်သည်။ သူမ ပေါင်ချင်းကပ်၍ ညင်းသည် တင်ထွန်းက အားနဲ့ဆွဲချွတ်သည် နာသဖြင့် သူမ အချွတ်ခံရသည်။
တင်ထွန်းက ချွတ်ပြီး သူမကို ဆိုဖာပေါ် ပစ်တင်ပြန်သည်။ ထို့နောက် သူမ အဖုတ်ကို စုပ်သည်။ အဖုတ်ကို အတင်းနမ်းသည်။ အဖုတ်ကို လျက်သည်။ ခပ်ကြမ်းကြမ်း နမ်းစုပ်သည်။ “နင် မကြမ်းနဲ့လေ အဲလို မကြမ်းနဲ့” သူမ ပြောသည်။ သို့သော် မထူး။ တင်ထွန်းက အဖုတ်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် လျက်သည်။ တင်ထွန်းသည် ဘောင်းဘီထချွတ်သည်။ သူမ အသာငေးနေသည်။ တင်ထွန်းက သူမကိုယ်ကို ခွကာ သူမပါးစပ်ထဲ လီးအတင်းထည့်သည်။ သူမမှာ မထင်မှတ်သည့် အကွက်များကြောင့် လီးမစုပ်ချင်ပါ။ ကောင်လေးက မရ။ သူမ ပါးစပ်ထဲ လီးအတင်းထိုးထည့်သည်။ သူမ မတတ်နိုင်၍ ပါးစပ်ဟပေးရသည်။ တင်ထွန်းက သူမခေါင်းကိုကိုင်ကာ ပါးစပ်ကို လိုးသည်။ မိုးမိုးရီမှာ ကျောင်းသားလေး၏ အတင်းအဓမ္မ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆက်ဆံတာကို မခံ့ချိ မခံသာ ခံရသည်။ ထို့နောက် တင်ထွန်းက သူမပါးစပ်ကို အတင်းစုပ်နမ်းပြန်သည်။ ထို့နောက် သူမကို ခွ၍ စောက်ဖုတ်ကို လိုးသည်။
အို့…. စောက်ဖုတ်ထဲ လီးက ပြွတ်ခနဲ ဝင်သည်။ သူမ အွတ်ခနဲ အော်ရသည်။ တင်ထွန်းလည်း အို့ဟု အံကြိတ်သည်။ ထို့နောက် ဆောင့်ထည့်သည်။ သူမပေါင်ကို ဆွဲကားရင်း သူမကို လိုးသည်။ ဆောင့်သည်။ သူမက လက်နဲ့ တွန်းသည်။ တင်ထွန်းက သူမလက်ကို ပူးကိုင်လိုက်ပြီးနောက် သူမကို ဆောင့်သည်။ စောက်ဖုတ်ကို အစိမ်းလိုက် အလိုးခံရသဖြင့် မိုးမိုးရီမှာ တော်တော်နာသည်။ သူမ အော်နေရသည်။ တင်ထွန်းကလည်း မညာမတာလိုးသည်။ စောက်ဖုတ်ထဲ လီးကြီးက တစ်တစ်ခွခွဝင်ကာ ဆောင့်နေသည်။ သားအိမ်ပင် ပူနေသည်။ သူမကို ဆိုဖာလက်ကိုင်ပေါ် ခေါင်းတင်ကာ သူမပေါင်တဖက်ကို ကျောမီပေါ် တင်သည်။ သူမ ခြေတဖက်ကို အောက်ချသည်။ ပြီးလျင် သူမစောက်ဖုတ်ကို ဆက်လိုးသည်။ သူမမှာ ဤမျှလောက် ပေါင်မကားစဖူး ကားရသည်။ ပေါင်ကြောလည်း နာသည်။ စောက်ဖုတ်လည်း နာသည်။ လီးကလည်း လူငယ်သာဆိုသည် တော်တော်ကြီးသည်။
သူမမှာ ဆံပင်များလည်း ဖွာလန်ကြဲနေရသည်။ ရာသီဥတုကပူရာ ချွေးတွေလည်း ရွဲနစ်နေသည်။ စောက်ဖုတ်ကိုလည်း တဖတ်ဖတ် ဆောင့်လိုးခံနေရသည်။ တင်ထွန်းက နို့တွေကိုလည်း ဆွဲချေကစားရင်း အကျႌကို ချွတ်သည်။ တင်ထွန်းသည် သူမကို ကြည့်ရင်း စောက်ဖုတ်ကို ခပ်မြန်မြန်လေး ဆောင့်သည်။ သူမ နွုတ်ခမ်းကို လက်ညိုးနဲ့ ဖိသည်။ စောက်ဖုတ်ထဲ လီးက တပြွတ်ပြွတ်ဝင်နေသည်။ သူမ အော်သံနဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲ လီးဝင်သံများ ဆူညံနေသည်။ တင်ထွန်းက လီးကို ခပ်သွက်သွက် ချွတ်သည်။ ချက်ချင်းပင် စောက်ဖုတ်ကို ကောက်ယက်သည်။ စောက်ဖုတ်ကို မွေ၍ ယက်သည်။ နွုတ်ခမ်းနဲ့ဖိကာ ယမ်းသည်။ ပြီးလျင် ပြန်လိုးသည်။ သူမမှာ အကားလိုက် ဆက်အလိုးခံရသည်။ လိုးရင်း သူမနွုတ်ခမ်းကို စုပ်သည်။ ပြီးလျင် တင်ထွန်းသည် တဆတ်ဆတ်တုန်ရင်း လီးရည်ကို စောက်ဖုတ်ထဲထည့်ရင်း သူမအပေါ် မှောက်အိပ်သည်။ သူမကလည်း မောနေသည်။ သို့သော် တင်ထွန်းကို အသာတွန်းထုတ်သည်။
တင်ထွန်းက သူမကို အဖက်လိုက် ထထိုင်သည်။ သူမကို ဖက်ရင်း ဆိုဖာပေါ် နားသည်။ “ဘာလို့ အဲလိုကြမ်းတာလဲ” “မမ အိုးကြီးက အယ်ထွက်နေတော့ ကျနော် ကြမ်းကြည့်ချင်နေတာ ကြပြီ” “တော်ပြီ လူကို မောသွားတာပဲ၊ နင်ပြန်တော့၊ ကျောင်းပြန်တက်” “ဒီအချိန် ကျနော်က မမရဲ့ ကျောင်းသား မဟုတ်တော့ဘူးလေ မမ၊ မမရဲ့ ဖောက်သည်ဖြစ်နေပြီ၊ ဒါကြောင့် ကျနော် စိတ်ကြိုက်နေပြီးမှ ပြန်မပေါ့” “နင် မိုက်ရိုင်းလှချည်လား” “ကျနော်ပုံက လူယဉ်ကျေးပုံ ပေါက်နေလို့လား” “ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နင်ပြန်တော့ နင့်ကို ငါစိတ်မဝင်စားဘူး” “ကျနော် စိတ်ဝင်စားရင် ပြီးတာပဲ မမ၊ ကဲ မမ ကုတင်ပေါ်ခံချင်လား ဒီမှာပဲ ဆက်ခံမလား” “မင်းကွာ” ထိုနေ့တွင် တင်ထွန်းက မိုးမိုးရီကို တနေကုန် ဖုတ်သည်။ မိုးမိုးရီကတော့ သိပ်မကြည်။ သို့သော်လည်း တင်ထွန်းက သိပ်ပြီး ဂရုစိုက်မနေဘဲ လိုးစရာရှိတာ လိုးသည်။ “တော်ပြီနော် နောက် ရှောင်ပေးပါနော် မောင်လေး” မိုးမိုးရီချော့ရသည်။
နောက်များတွင် တင်ထွန်းက အိမ်နေရင်းလည်း မိုးမိုးရီကို ထိကပါး ရိကပါးလုပ်သည်။ “ထမင်းချက်ကူမယ်လေ” ဆိုကာ မီးဖိုချောင်တံခါးပိတ်၍ မီးဖိုချောင်ထဲ သူမကို လီးစုပ်ခိုင်းတာမျိုး လုပ်သည်။ ခဏခဏ လုပ်ခိုင်းတတ်သဖြင့် သူမလည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်လိုက်သည်။ သို့သော်လည်း အိမ်တွင် လူက များသည်။ ဇော်ထက်က တွေ့သွားသည်။ ဇော်ထက်က အသာမချောင်းဘဲ သူဇာခင်ကိုရော ရူပါခင်ကိုပါ ပြသည်။ ထိုတွင် သူဇာခင်က အန်တီမိုးကိုကြည့်လိုက် ဇော်ထက်ကို ကြည့်လိုက်နဲ့ လွုပ်လွုပ်စိစိ ဖြစ်နေသည်။ ထို့နောက် သက်ပြင်း အသာခိုးချကာ လစ်ထွက်သွားသည်။ ဇော်ထက်က သူဇာခင်နောက် အသာလေး လိုက်ချောင်းသည်။ သူဇာခင်က အိမ်ပြင်ထွက်၍ အကွယ်လေး တစ်ခုတွင် သူမ အဖုတ်ကို အသာပြန်နှိုက်ရင်း ညည်းနေသည်။ သူဇာခင်မှာ ပါးဖောင်းဖောင်း မျက်နှာသွယ်သွယ်နဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းသည့် မျက်လုံးလေး ရှိသည်။ ထိုနေ့က သူဇာခင်မှာ အနက်ရောင်အကျႌနဲ့ ရှမ်းအစင်းပါသော နီဖျော့ဖျော့ထမိန်ကို ဝတ်ထားသည်။
သူဇာခင်က ထမိန်ပေါ်ကနေ အဖုတ်ကို နှိုက်နေရာမှ ထမိန်ကို အသာပင့်၍ နှိုက်သည်။ သူဇာခင်မှာတင်ထွန်း အစ်မဖြစ်၍ ဇော်ထက်ထက် တစ်နှစ်ကြီးသည်။ “ကူညီပေးရမလား မမ” သူဇာခင်က ထမိန်ကို အမြန်ဆွဲအုပ်သည်။ ဇော်ထက်က သူဇာခင် ပခုံးကို အသာဖက်လိုက်သည်။ သူဇာခင် ရုန်းမလိုလို မရုန်းမလိုလို လုပ်နေသည်။ ဇော်ထက်က တဖက်က ဖက်ရင်း တဖက်က သူဇာခင် ပေါင်ရင်းကို နှိုက်သည်။ သူဇာခင် မှိန်းသွားသည်။ ဇော်ထက်က သူဇာခင် ထမိန်ကို အသာပင့်လိုက်သည်။ ပြီးလျင် ဒူးထောက် ထိုင်လိုက်သည်။ သူဇာခင်က ဘေးဘီကို မလုံမလဲကြည့်နေသည်။ ဇော်ထက်က ပင်တီကို အသာချွတ်၍ စောက်ဖုတ်ကိုလျက်ပေးသည်။ “ဟား” သူဇာခင် ညည်းသည်။ စောက်ဖုတ် ဖောင်းအိအိလေးကို ဖွဖွစုပ်နမ်းရင်း ပေါင်များကို သပ်ပေးသည်။ သူဇာခင်က တလွုပ်လွုပ်ဖြစ်နေသည်။ ခဏကြာတော့ သူဇာခင်ကိုယ်တိုင် ထမိန်ပင့်ပေးသည်။ ဇော်ထက်က အသာမတ်တပ်ရပ်ပြီး ဘောင်းဘီချွတ်လိုက်သည်။
ဘစ်ထဲမှ ဖောင်းနေသော လီးကို သူဇာခင်အား ကိုင်ခိုင်းသည်။ သူဇာခင်က ဘစ်ကိုပွတ်သည်။ ဇော်ထက်က ဘစ်ကို အသာချွတ်လိုက်သည်။ သူဇာခင်က မျက်နှာလွဲသည်။ ဇော်ထက်က လက်ဝါးထဲ တံတွေးထွေးထည့်ကာ လီးထိပ်ကို သုတ်လိုက်သည်။ ပြီးနောက် သူဇာခင် ခါးကို အသာဖက်လိုက်ပြီး အောက်ကနေ ပင့်လိုးလိုက်သည်။ သူဇာခင်မှာ မြောက်တက်သွားသည်။ သူဇာခင် ပေါင်တဖက်ကို ပွတ်သပ်ရင်း ဇော်ထက် လိုးသည်။ သူဇာခင်က နံရံကိုမီ၍ လက်တဖက်ဖြင့် ပါးစပ်ကို ပိတ်ကာ အလိုးခံသည်။ ဇော်ထက်က ပေါင်တဖက်ကို အသာပင့်၍ ဆက်လိုးသည်။ သူတို့ကို ရူပါခင်က ချောင်းနေသည်ကိုတော့ နှစ်ယောက်သား ပြီးသွားသည့်တိုင် မသိလိုက်။ ထိုည ၉ နာရီတွင် စာကျက်ဝိုင်းပြီး၍ အိမ်ပြန်ကြသောအခါ ရူပါခင်က ဇော်ထက်ကိုသာ စိုက်ကြည့်နေသည်။ သူဇာခင်ကလည်း ဇော်ထက်ကိုသာ စိုက်ကြည့်နေသည်။ သို့သော်လည်း သူမက ရူပါခင် ဇော်ထက်ကို စိုက်ကြည့်နေသည်ကိုလည်း မြင်သည်။
နောက်နေ့တွင် တင်ထွန်းက မီးဖိုချောင်ထဲ အန်တီမိုးကို ကူရန်ဆိုပြီး ထွက်သွားသည်။ သူဇာခင်နဲ့ ဇော်ထက်ကလည်း ဘာလိုလို ညာလိုလို အပြင်လစ်သည်။ ရူပါခင်လည်း မနေနိုင်ပါ။ အသာလေး လိုက်ချောင်းသည်။ မိန်းကလေးချင်းချင်း နည်းနည်းပါးပါး ရိပ်မိသလို ရှိနေသော ပိုပိုခင်က ရူပါခင်ကို လိုက်ချောင်းသည်။ စာကျက်ဝိုင်းတွင် တင်စိုး မိုးဆွေ သင်းသင်းချိုနှင့် မိုးမိုးဆောင်းတို့သာ ကျန်နေသည်။ သူတို့လည်း စာမကျက်ဖြစ်တော့ဘဲ နေကြာစေ့စားကာ စကားပြောနေကြသည်။ ဇော်ထက်နဲ့ သူဇာခင်ကတော့ ဖက်လိုက် နမ်းလိုက်လုပ်ရင်း ကမ္ဘာကြီးကို မေ့နေကြသည်။ ရူပါခင်နဲ့ ပိုပိုခင်က အသာချောင်းရင်း ရင်တွေ တထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေကြသည်။ ပိုပိုခင်မှာလည်း မနေနိုင်ဘဲ ရူပါခင်အိုးကို ပွတ်သပ်နေမိသည်။ ရူပါခင်လည်း နောက်ပြန်ဖက်ကာ ပိုပိုခင်၏ ပေါင်ကို ပွတ်သပ်နေမိသည်။ ဇော်ထက်နဲ့ သူဇာခင်ကတော့ ပွဲကြမ်းနေကြသည်။ မိုးဆွေက ရေဆာသည်ဆိုသဖြင့် မိုးမိုးဆောင်းက ရေခပ်ပေးရန် မီးဖိုချောင်ကို ထွက်လာခဲ့သည်။
သို့သော် သူမတွေ့လိုက်သည်က အန်တီမိုးက တင်ထွန်းလီးကြီးကို အားပါးတရ စုပ်နေသည်ကို ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ သူမက ကိုင်လာသော ဖန်ခွက် ကျလုလု ဖြစ်သွားသည်။ ထို့နောက် အသာပြန်လစ်ထွက်ကာ ကျန်နေသည့်သူကို သွားခေါ်၍ ပြသည်။ ကျန်သည့်သူများလည်း ကြက်သေသေနေကြသည်။ ထို့နောက် “ဟိုလေးယောက်ကော” ဟု အသာမေးကြသည်။ ထို့နောက် ခြေဖွဖွနင်းကာ အိမ်နောက်ထဲကို ထွက်လာကြသည်။ ထို့နောက် သူတို့မှာ ရူပါခင်နဲ့ ပိုပိုခင်တို့ကို ရှေးဦးစွာတွေ့လိုက်ရသည်။ အားလုံး ထပ်၍ ကြက်သေသေရပြန်သည်။ ဆက်၍ အသာတိုးကြည့်လိုက်တော့ ဇော်ထက်က သူဇာခင်ကို အပီဖြုတ်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ မိုးဆွေနဲ့ တင်စိုးတို့ တယောက်မျက်နှာ တယောက်ကြည့်သည်။ ထို့နောက် ခြေဖွဖွနင်း၍ မိုးဆွေက သူညီမကိုပင် စိတ်မဆိုးနိုင်တော့ဘဲ ပိုပိုခင်ကို ဖက်လိုက်သည်။ ပိုပိုခင်လည်း နောက်က မိုးဆွေဖက်သည်ကို အသာလိုက်လျောမိသည်။
ရူပါခင်က မိုးဆွေညီမဖြစ်သဖြင့် တင်စိုးက သွားမဖက်ရဲ။ ထို့ကြောင့် အနီးတွင် ကြောင်တောင်တောင်ရပ်နေသည့် သင်းသင်းချိုနှင့် မိုးမိုးဆောင်းလက်ကို ဆွဲကာ အိမ်သာထဲ ဝင်လိုက်သည်။ မိုးမိုးဆောင်းနဲ့ သင်းသင်းချိုလည်း ကြောင်စိစီပါလာသည်။ မိုးဆွေသည် ပိုပိုခင်ကို သူ့အခန်းထဲ ဆွဲခေါ်ခဲ့သည်။ ပိုပိုခင်က ဆံပင်အရှည်ကြီးဖြစ်သည်။ ဤမိန်းခလေးများထဲမှ ဆံပင်အရှည်ဆုံးလည်းဖြစ်သလို ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် နည်းနည်းကျစ်လစ်ကာ လှသည့် မိန်းကလေး ဖြစ်သည်။ အခန်းထဲရောက်တော့ အဖြူတဝက် မရမ်းရောင်တဝက်နဲ့ ကနုတ်များဖော်ထားသည့် အကျႌဝတ်ထားသော ပိုပိုကို မိုးဆွေက နောက်ကနေ အသာဖက်လိုက်သည်။ ပိုပိုက နည်းနည်းကြောင်စီစီလေး ရပ်နေသည်။ မိုးဆွေက နောက်ကနေ နို့နှစ်လုံးကို ချိုင်းအောက်ကနေ ကိုင်လိုက်သည်။ ပိုပိုက အသာငြိမ်နေသည်။ နောက်ကနေ ဖက်ရင်း ပိုပိုအိုးကို မိုးဆွေက တေ့ထားသည်။
ခုနက သူဇာခင်နဲ့ ဇော်ထက်တို့ ဖြုတ်နေသည်ကို မျက်ဝါးထင်ထင်ကြည့်စဉ်ကတည်းက ဏှာထနေသော ပိုပိုမှာ နောက်ကနေလည်း အတေ့ခံထားရ နားရွက်တွေလည်း အနမ်းခံရ နို့လည်းအကိုင်ခံရတော့ ဖီးလ်အတော်တက်နေသည်။ မိုးဆွေက ကြယ်သီးများဖြုတ်၍ ဘော်လီထဲလက်ထည့်ကာ နို့ကိုင်တော့လည်း ဘော်လီကျွတ်အောင်ပင် သူမက ကူညီပေးသည်။ မိုးဆွေက ကုတင်ပေါ် သူမကို အသာတွန်းတင်သည်။ သူမလည်း အလိုက်သင့် အိပ်လိုက်သည်။ မိုးဆွေက သူမအကျႌကို ဖယ်၍ နို့နှစ်လုံးကို ကိုင်သည်။ အပျိုလေးဖြစ်သော်လည်း သူမနို့ကတော့ နည်းနည်းကြီးသည်။ ထို့ကြောင့် ဘော်လီပင် နည်းနည်းဆိုက်ကြီး ဝတ်ရသည်။ မိုးဆွေက နို့ကို အစုံလိုက်ကိုင်ပြီး ကစားသည်။ နို့သီးခေါင်းကို ကလိသည်။ နို့သီးခေါင်းကို လျှာဖြင့် ဝှိုက်ကစားသည်။ နို့သီးခေါင်းကို စို့သည်။ ပိုပိုမှာ မိုးဆွေအပြုအမူကြောင့် ခါးများပင် ကော့နေအောင် ခံရသည်။ မိုးဆွေက နို့စို့ပြီး ထမိန်ကို အသာချွတ်သည်။
ပင်တီကိုလည်း တပါတည်းချွတ်ချသည်။ ထို့နောက် သူမပေါင်နှစ်ဖက်ကို ကားနေအောင် ဆွဲကားသည်။ ပြီးလျင် သူမအဖုတ်ကို မိုးဆွေ စိုက်ကြည့်နေသည်။ “လှလိုက်တာ” မိုးဆွေက သူမအဖုတ်ကို ကြည့်ရင်း ပြောတော့ သူမ ရှက်မိသည်။ လက်ဖြင့် အဖုတ်ကို အုပ်မလို့ပင် ဖြစ်သွားသည်။ သို့သော် မိုးဆွေက လက်ဝါးဖြင့် အုပ်ကာ စပွတ်သည်။ ပိုပိုသည် အပျိုစင်ဖြစ်သည်။ ခုမှ အသက် ဆယ့်ငါး နှစ်သာ ရှိသေးသည်။ မိုးဆွေလည်း လူပျိုဖြစ်သည်။ သူလည်း အသက် ဆယ့်လေး နှစ်သာ ရှိသေးသည်။ သို့သော်လည်း ယောက်ျားသားပီပီ ဖူးကားများ ကြည့်ဖူးထားသူ ဖြစ်သောကြောင့် ဘယ်လိုစကိုင်ရမည်ကို သိနေခြင်း ဖြစ်သည်။ အဖုတ်ကို အသာပွတ်ပြီး ပိုပိုနို့ကို စို့သည်။ ပိုပိုက မျက်လုံးလေးမှိတ်ရင်း ငြိမ်ခံနေသည်။ မိုးဆွေက ပိုပိုစောက်ဖုတ်၏ ဂျီစပေါ့ကို လက်ခလယ်ဖြင့်ထိသည်။ ပိုပိုက အံလေးအသာကြိတ်သည်။ ပိုပို၏ ဗိုက်ခေါက်များက လှိုင်းတွန့်လေး မသိမသာထထသွားသည်။
မိုးဆွေက ပိုပိုစောက်ဖုတ်၏ ဂျီစပေါ့ကို ကလိရင်း နို့ကို စို့သည်။ နောက် အသာလေး လျှောဆင်းကာ ဗိုက်သားကို စုပ်သည်။ ပိုပိုက နွုတ်ခမ်းကို သွားတက်လေးဖော်ကာ အသာကိုက်ရင်း ငြိမ်နေသည်။ မိုးဆွေက ပိုပိုပေါင်ကြားထဲ လေးဖက်ထောက်၍ ကုန်းနေလိုက်သည်။ ပိုပိုပေါင်နှစ်ဖက်ကို ဆွဲကားသည်။ ပိုပိုမှာ မိုးဆွေ စောက်ဖုတ်ကို အကြာကြီး ကြည့်နေသဖြင့် ဗိုက်သားများ စောက်ဖုတ်သားများ တဆတ်ဆတ်တုန်လျက် ရှိသည်။ ပိုပို၏ စောက်ဖုတ်မှာ စောက်မွေးနုနုလေးများ ပါးပါးလေး ပေါက်နေသည်။ စောက်မွေးများက အပေါ်သို့ တညီတည်း ပေါက်နေသည်။ မိုးဆွေက ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ပွေ့လိုက်သည်။ ပိုပို၏ ပေါင်ကို နမ်းသည်။ ပိုပိုမှာ တဆတ်ဆတ်တုန်လျက် ရှိသည်။ ပေါင်များကို နမ်းပြီး စောက်ဖုတ်ကို ဖြဲသည်။ မိုးဆွေက လျှာအပြားလိုက်ထားကာ အောက်ကနေ အပေါ်ကို အပြားလိုက် လျက်သည်။ “အင့် ဟင့် အ အင့်” ပိုပို တံတွေးများ ခဏခဏမြိုချရင်း တုန်နေသည် နို့တွေပင် တုန်သည်။
မိုးဆွေက လျက်ပေးသည် စောက်ဖုတ်ကို ဖြဲကာ လျက်သည်။ ပိုပိုမှာ ပို၍ ကောင်းနေသည်။ တုန်တုန်ရီရီလည်း ဖြစ်နေသည်။ မိုးဆွေက သူမကို ဆွဲလှည့်သည်။ မိုးဆွေ ပေါင်ပေါ် သူမခေါင်းအုံးအိပ်သည်။ မိုးဆွေက အကျႌတွေအကုန်ချွတ်သည်။ သူမ တစောင်းလှည့်ပြီး ပါးစပ် အသာဟ၍ မိုးဆွေလီးကို စုပ်သည်။ မိုးဆွေက သူမ ဆံပင်များ ဖယ်ပေးရင်း နို့ကို ကိုင်သည်။ ပိုပိုက တစောင်းအိပ်ရင်း လီးကို ငုံ၍ စုပ်ပေးသည်။ “ပိုပို” “ရှန်” “လိုးတော့မယ်ကွာ နော်” “အင်း” ပိုပိုအသာခေါင်းညိတ်သည်။ ပိုပိုပေါင်ကို အသာဆွဲကားလိုက်သည်။ ပိုပိုက ပက်လက်လေး အိပ်ပေးသည်။ မိုးဆွေက အပေါ်ကနေ ထပ်အိပ်ကာ လီးကို အသာကိုင်ပြီး စောက်ဖုတ်တွင် တေ့လိုက်သည်။ ပိုပိုမျက်နှာလေး နွမ်းချိနေသည်။ သူ အသာလေး လီးကို ထိုးထည့်သည်။ ပိုပိုမျက်နှာက နည်းနည်းရွုံ့မဲ့သွားသည်။ သို့သော်လည်း ပိုပိုက အလိုက်တသိကော့ပေးသည်။ လီးက စောက်ဖုတ်ထဲ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဝင်သွားသည်။
နာတယ်…. ရူပါခင်သည် ဇော်ထက်နှင့် သူဇာခင်အပြတ်လိုးနေကြသည်ကို ငေးရင်း ပိုပိုကာ တယောက်လာခေါ်သွားသည်ကို သတိထားမိသည်။ ပိုပိုနှင့် သူမ ပွတ်သပ်ကစားရင်း ဇော်ထက်လီးကြီး သူဇာခင်အဖုတ်ထဲ တဖွတ်ဖွတ်ဝင်နေသည်ကို ငေးရာမှ ဟာတာတာ ဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် အသာလစ်ထွက်၍ အသံကြားရာ အစ်ကိုအခန်းထဲကြည့်လိုက်တော့ အစ်ကိုဖြစ်သူ မိုးဆွေက ပိုပိုကို လေးဖက်ထောက်ကုန်းပြီး ဆောင့်လိုးနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ဇော်ထက်က သူဇာကိုလိုးနေချိန် မိုးဆွေက ပိုပိုကို လိုးနေသည်။ ထို့ကြောင့် စာကျက်နေသည့် နေရာသို့ ရူပါခင် လာခဲ့သည်။ စာကျက်သည့်နေရာတွင် စာအုပ်များက တုန်းလုံးပက်လက် လဲ၍ လှန်သည်က လှန် အုပ်သည်က အုပ် ဆင့်သည်ကဆင့်ဖြစ်နေသည်။ သူတို့ကို ကြည့်နေ ဖတ်နေသူဟူ၍ မရှိ။ စာအုပ်များက အထီးကျန်နေသည်။ “ငါ့နောက် လိုက်ခဲ့” တင်စိုးက မိုးမိုးဆောင်းနှင့် သင်းသင်းချိုကို ခေါ်ကာ အိမ်သာထဲဝင်လိုက်သည်။
သူ ပထမစဉ်းစား၍ ရသည့်နေရာက အိမ်သာ ဖြစ်နေသဖြင့် မတတ်နိုင်။ အိမ်သာထဲ အိမ်သာနံရံကို မီ၍ သင်းသင်းနဲ့ မိုးမိုးတို့ ရပ်နေကြသည်။ သင်းသင်းနဲ့ မိုးမိုးနှစ်ယောက်တွင် သင်းသင်းက ပိုလှသည်။ မျက်နှာက ချစ်စရာ ကောင်းသည်။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်လည်း ရှိသည်။ မိုးမိုးက နည်းနည်းပုသည်။ လုံးကျစ်ကျစ်လေး ဖြစ်သည်။ သို့သော် မိုးမိုး အားသာချက်က ရင်သား ဖွံ့ဖြိုးသည်။ “သဘောတူတယ် မဟုတ်လားဟင်” တင်စိုးက ဘာကိုမေးမှန်း မသိမေးသည်။ သင်းသင်းနဲ့ မိုးမိုးကလည်း ဘာမျ ပြန်မပြော။ တင်စိုးက သင်းသင်းခါးကို ဖက်၍ ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲဖက်သည်။ သင်းသင်းပါးကို နမ်းသည်။ သင်းသင်းက မိုးမိုးကို ကြည့်ရင်း ငြိမ်နေသည်။ မိုးမိုးကလည်း သင်းသင်းနဲ့ တင်စိုးကို ကြည့်နေသည်။ တင်စိုးက သင်းသင်းနို့ကို စကိုင်သည်။ အကျႌပေါ်ကနေ နို့နှစ်လုံးစလုံးကို ပွတ်သည်။ သင်းသင်းက ခေါင်းငုံ့နေသည်။ မိုးမိုးက လက်ညိုးကို တဖက်လက်ဖြင့် ဆွဲစကားနေသည်။
တင်စိုးက သင်းသင်းကို နမ်းသည် နို့ကို ပွတ်သပ်ရင်း ကြယ်သီးကို ဖြုတ်သည်။ ပခုံးကနေကိုင်၍ ပွတ်သပ်ရင်း အကျႌကို ချွတ်သည်။ အစင်းကြောင်းလိုက်ပါသော ဘော်လီကို အောက်ကနေ အသာပင့်ကိုင်သည်။ “ပြွတ်” သင်းသင်းကို သူစုပ်နမ်းသည်။ သင်းသင်းကလည်း ပြန်နမ်းသည်။ အောက်ကို နမ်းဆင်းရင်း သင်းသင်းနို့အပေါ်ပိုင်းကို စုပ်သည်။ တင်စိုးက သင်းသင်းနို့ကို စို့ရင်း မိုးမိုးခါးကို လှမ်းဖက်သည်။ မိုးမိုးက ညွတ်ခနဲ ပါလာသည်။ တင်စိုးက သင်းသင်းနို့ကို စို့ရင်း မိုးမိုးနို့ကို လှမ်းကိုင်သည်။ မိုးမိုးကလည်း ကော့ပေးထားသည်။ တင်စိုးက သင်းသင်းလက်ကို ယူ၍ မိုးမိုးအကျႌကြယ်သီးပေါ် တင်လိုက်သည်။ သင်းသင်းက အလိုက်သိစွာ မိုးမိုးကြယ်သီးကို ဖြုတ်သည်။ သူက သင်းသင်းဘော်လီကို ချွတ်သည်။ ခုတော့ သင်းသင်းရော မိုးမိုးပါ အပေါ်ပိုင်း ဗလာဖြစ်သွားသည်။ သင်းသင်းနို့က စူးကာ ချွတ်သည်။ မိုးမိုးနို့က ဝိုင်းသည်။ တင်စိုးက နို့များကို နို့သီးခေါင်းချင်း ထိစေသည်။
မိုးမိုးရော သင်းသင်းပါ မျက်လုံးလေး မှိတ်ထားသည်။ သူက နို့သီးတွေအချင်းချင်း ပွတ်ကစားခိုင်းရင်း မိုးမိုးကို နမ်းသည်။ မိုးမိုးကလည်း ပြန်နမ်းသည်။ မိုးမိုးနှင့် နွုတ်ခမ်းချင်း စုပ်သည်။ တင်စိုးက မိုးမိုးကို နမ်းပြီး သူမတို့ ဆံပင်ကို သပ်တင်၍ မျက်နှာကို သေချာကြည့်သည်။ သင်းသင်းရော မိုးမိုးပါ တဏှာစိတ်ထကာ မျက်နှာလေးက နွမ်းရိနေသည်။ ပို၍လည်း ချစ်စရာ ကောင်းနေသည်။ သူက မိုးမိုးနို့ကို စို့သည်။ သင်းသင်းနို့ကို ကိုင်သည်။ နောက် သင်းသင်းနို့ကို စို့၍ မိုးမိုးနို့ကို ကိုင်သည်။ ပြီးလျင် မိန်းကလေး နှစ်ယောက်လုံးကို အောက်ထိုင်ချခိုင်းလိုက်သည်။ သူဘောင်းဘီကို အသာချွတ်ပေးလိုက်သည်။ “ခိ” မိုးမိုးက လီးကို မြင်၍ ရယ်သည်။ သင်းသင်းက အသက် ၁၄ နှစ်ပြည့်ပြီ ဖြစ်သော်လည်း မိုးမိုးက အသက်ပြည့်ရန် ခြောက်လလောက် လိုနေသေးသဖြင့် လီးကို တွေ့ဖူးသော အပျိုစင်ရိုင်းလေးခမျာ ရယ်မိသည်။ သင်းသင်းကတော့ နည်းနည်းထန်နေပြီ ဖြစ်ရာ လီးကိုတွေ့သည်နှင့် မျက်နှာက ပိုညိုးကျသွားသည်။
တော်တော်ဆာနေသည့်ပုံရှိသည်။ တင်စိုးကိုလည်း ညုအကြည့်ဖြင့် မော့ကြည့်နေသည်။ “နမ်းလေ ကောင်မ” သင်းသင်းက ပြောသည်။ မိုးမိုးက နွုတ်ခမ်းဖြင့်လီးကို တချက်ပြွတ်ဆို စုပ်သည်။ ပြန်ဆုတ်သွားသည်။ သင်းသင်းက ပါးစပ်ဟ၍ လီးကို ပင့်စုပ်သည်။ မျက်နှာကလည်း ပြုံးယောင်သန်းလာသည်။ တင်စိုးပေါင်ကို လက်ဖြင့်ပွတ်သပ်သည်။ လက်ဝါးဖြင့်ရော လက်ခုံဖြင့်ပါ ပွတ်သပ်သည်။ လီးကိုလည်း ငုံ၍ စုပ်ထားသည်။ မိုးမိုးက ဘေးကနေ ကြည့်ရင်း တင်စိုးပေါင်ရင်းကို စုပ်နမ်းသည်။ သင်းသင်းက လီးကို ဆန့်၍ ဆွဲစုပ်သည်။ ထိပ်ကို ငုံထားသည်။ ထိုအခါ မိုးမိုးက လီးတံကြီးကို လျက်သည်။ သင်းသင်းသည် မိုးမိုးပါးစပ်ထဲ လီးကို ကိုင်၍ ထည့်ပေးသည်။ မိုးမိုးက စုပ်နေသည်ကို ငေးကြည့်နေသည်။ ပြီးလျင် လပြွတ်ကို လျက်သည်။ မိုးမိုးက မစုပ်တော့ဘဲ ပြန်ဆုတ်သည်။ သင်းသင်းက ပြန်စုပ်သည်။ “ကုန်းလိုက်နော် သင်းသင်း” သင်းသင်းက အိမ်သာပြတင်းဘောင်ကို လက်ထောက်၍ ကုန်းသည်။
ပေါင်နည်းနည်းကားလိုက်ပြီး သူ နောက်ကနေ အသာလိုးလိုက်သည်။ မိုးမိုးကိုဖက်ထားသည်။ မိုးမိုးနှင့် နွုတ်ခမ်းချင်း စုပ်ရင်း သင်းသင်းကို နောက်ကနေ လိုးသည်။ မိုးမိုးက နည်းနည်းပုရာ သူကုန်း၍ စုပ်နေရာမှ သင်းသင်းကို လိုးတာ အဆင်မပြေသဖြင့် သူအရပ်လိုက်လိုးလိုက်သည်။ မိုးမိုးက သူ့ကို ဖက်ရင်း သူ့နို့ကို စို့သည်။ ရူပါခင်သည် တင်စိုးလိုးချက်များကို ကြည့်ရင်း စောက်ဖုတ်က ပိုယားလာသည်။ တင်ထွန်းသည် အစက လီးကိုသာ စုပ်ခိုင်းသော်လည်း လရည်က တော်တော်နဲ့မထွက်တော့ မမကို လိုးချင်လာသည်။ မမမိုးကလည်း လီးစုပ်ရင်း တအင်းအင်းညည်းနေသည်။ ထို့ကြောင့် မမမိုးကို စားပွဲပေါ်တင်ကာ စောက်ဖုတ်ကို လျက်ပေးသည်။ ပြီးလျင် စောက်ဖုတ်ထဲ လက်နှစ်ချောင်းသွင်း၍ ထိုးကစားသည်။ မမမိုးက လူးလှိမ့်၍ ညည်းနေသည်။ သူမ စောက်ဖုတ်ကို လက်ချောင်းထည့်၍ ကစားရင်း နို့ကို စို့သည်။ “အ အ အု အ” တင်စိုးက မမမိုးကို ကြမ်းပြင်ပေါ် အိပ်ခိုင်းကာလိုးသည်။
လိုးချင်တွေက ပြင်းထန်သည် မမမိုးလည်း ကြိတ်မှတ်မခံနိုင်တော့ဘဲ အော်ရသည်။ “ဒေါက် ဒေါက် ဒေါက်” တံခါးခေါက်သံကြောင့် နှစ်ယောက်သား ပူထူကာ မတ်တပ် ခုန်ရပ်ကြသည်။ အဝတ်များကိုလည်း အလျင်အမြန် ဖုံးကြသည်။ ဟန်နည်းနည်းဆောင်ရင်း တံခါးကို ဖွင့်သည်။ “ဘာ ဘာလုပ်မလို့လဲ တူမလေး” “အန်တီတို့က အရမ်းတကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်” “ဘ ဘာဖြစ်လို့လဲ” ရူပါခင်က အန်တီမိုးလက်ကို ရုတ်တရက်ဆွဲသည်။ အခန်းထဲ ဆွဲထွက်သည်။ လက်ညိုးကို နွုတ်ခမ်းဝတွင် တေ့၍ တိုးတိုးလေးလုပ်ရန် အချက်ပြကာ အိမ်နောက်ဖေးခေါ်သည်။ တင်ထွန်းလည်း အသာလိုက်လာသည်။ အိမ်နောက်ဖေးတွင် သူဇာခင်က အိမ်နံရံကို လက်ထောက်ကုန်းနေသည်။ ဇော်ထက်က နောက်ကနေ ဖြုတ်နေသည်။ သူဇာခင်မှာ မျက်လုံးအစုံမှိတ်၍ အလိုးခံနေသည်။ တင်ထွန်းက ရုတ်တရက်ဒေါသဖြင့် အော်မည်လုပ်သည်။ ရူပါခင်က တင်ထွန်းပါးစပ်ကို လှမ်းပိတ်ထားပြီး နောက်တနေရာ ဆက်ခေါ်၍ မိုးဆွေကို ပြသည်။
ပိုပိုက မိုးဆွေအပေါ်ကနေ ထိုင်၍ ဆောင့်ချနေသည်။ မိုးဆွေက ပိုပိုနို့ကို ကိုင်၍ အောက်ကနေ ပင့်လိုးတက်နေသည်။ တင်ထွန်းမှာ မျက်လုံးပြူးနေသည်။ ရူပါခင် နောက်နေရာ ဆက်ခေါ်သည်။ ထိုနေရာတွင် တင်စိုးက မိုးမိုးကို နံရံတွင် ကျောမီခိုင်းထားပြီး အရပ်လိုက်လိုးနေသည်။ ဘေးတွင်လည်း သင်းသင်းအဖုတ်ထဲကို လက်က နွုတ်ထားသေးသည်။ “အို ဘယ် ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်တာလဲ” အန်တီမိုးမိုးရီက တအံ့တသြပြောသည်။ “တင်ထွန်း” ရူပါခင်က တင်ထွန်းကို ခေါ်သည်။ “ငါ မလှဘူးလားဟင်” “လှ လှပါတယ်” “အန်တီမိုး သမီးတကယ်လှရဲ့လားဟင်” အန်တီမိုးလည်း ရူပါခင်ကို ဖက်သည်။ “လှပါတယ် သမီးရယ်” “သမီးလည်း ပါချင်တယ် သမီးလည်း အချစ်ခံချင်တယ်” “လာပါ သမီးလေးရဲ့၊ လာမောင်လေး မမအခန်းထဲ သွားကြရအောင်” ထိုညနေခင်းသည် စာကျက်ဝိုင်းထဲ နောက်ကျမှ အသီးသီးပြန်ရောက်လာသည်။ အားလုံးကလည်း တယောက်မျက်နှာ တယောက်ရဲရဲမကြည့်ဝံ့ကြ။
တင်ထွန်းနဲ့ သူဇာခင်, မိုးဆွေနှင့် ရူပါခင်တို့က ပိုဆိုးသည်။ သူတို့က မောင်နှမတွေ ဖြစ်ရာ တယောက်နှင့်တယောက် မျက်နှာလွဲနေကြသည်။ ကိုးနာရီမထိုးခင်တွင်ပင် သူ့လွယ်အိတ် ကိုယ့်လွယ်အိတ် အသီးသီးယူ၍ အသက အသက ထပြန်ခဲ့ကြသည်။ အိမ်တွင်ကျန်နေသော အန်တီမိုး မိုးဆွေနှင့် ရူပါလည်း ကိုယ့်အိပ်ခန်းကိုယ် တိတ်ဆိတ်စွာ ဝင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုည၌ ဆယ်ယောက်စလုံး ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်ကြ။ ယောက်ျားလေးများကတော့ ထိုည၌ ကိုယ်မလိုးလိုက်ရသည့် အခြားမိန်းကလေးများကို မှန်းရင်း ကွင်းတချီစီထုဖြစ်ကြသည်။ မိန်းကလေးများကလည်း မိမိအပျိုစင်ဘဝကို ပုံအပ်ရသည်ကို ကျေနပ်နေကြသည်ကိုတော့ ဘယ်သူမှ မသိလိုက်ကြပေ။ နောက်နေ့ညနေတွင် တယောက်နဲ့တယောက်က ဘယ်သူမှ မလာတော့ဟု ထင်ခဲ့ကြသော်လည်း မနေ့က ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့သည့်အလား လူစုံတက်စုံ ရောက်လာခဲ့ကြသည်။ စာကျက်သည့်နေရာ၌ ဝိုင်းထိုင်ရင်း မနေ့က ကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်ခဲ့သည့် အတွဲကိုသာ မျက်လုံးဝင့်ကြည့်မိကြသည်။
အကြည့်ချင်း ဆုံပြန်တော့လည်း မျက်လွာ ချကြပန်သည်။ အန်တီမိုးကတော့ အကြီးဆုံးလည်းဖြစ် ဆရာမလည်းဖြစ်သဖြင့် နည်းနည်းမျက်နှာပူနေသည်။ “အဟမ်း” ဇော်ထက်က တိတ်ဆိတ်နေသည့် အခန်းကို ချောင်းတစ်ချက်ဟန့်၍ နှိုးလိုက်သည်။ မိန်းကလေးတွေက ခေါင်းငုံ့၍ စာအုပ်ကိုယ်စီထုတ်ကြသည်။ “မမ” “ဟင်” “ရှင်” ဇော်ထက်က အန်တီမိုးအား ခေါ်လိုက်သော်လည်း သူဇာခင်ကပါ ကပ်ထူးသည်။ သူမ ထူးပြီးခါမှ မှားမှန်းသိ၍ အစ်ကိုဖြစ်သူ တင်ထွန်းကို လှမ်းကြည့်သည်။ တင်ထွန်းကလည်း သူမကို စိတ်ပျက်သည့်ပုံဖြင့် လှမ်းကြည့်နေသည်။ သို့သော်လည်း ဘယ်သူမှ မရိပ်မိစေချင်။ နောက်တချက်မှာ မနေ့က တင်ထွန်းတယောက် ရူပါခင်ကို လိုး၍ မဝသေးသောကြောင့် သူက ရူပါခင်ကိုသာ အာရုံက ရောက်နေပြန်သည်။ “စာသင်ဦးမှာလား” “အင်းလေ သင်မှာပေါ့” အန်တီမိုးက ဘာမှ မဖြစ်ဟန်ပြောသည်။ ကျနော်ကတော့ မနေ့က သင်ခန်းစာကိုပဲ လက်တွေ့ပြန်သင်စေချင်တယ်။
မမက နည်းနည်းဝါရင့်ပြီလေ၊ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ကို နည်းလမ်းကောင်းလေး ဘာလေး ပေးနိုင်မယ်ထင်တယ် “အိုး တော်ကြစို့ကွယ်နော် စာကြည့်ကြရအောင်” မိုးဆွေက ထလာသည်။ ဇော်ထက်လက်ကို ဆွဲ၍ အန်တီမိုးနား ထိုင်ခိုင်းသည်။ “ဟန်ဆောင်မနေနဲ့တော့ အန်တီ၊ ဘယ်သူမှ စာ စိတ်မဝင်စားဘူး၊ ကျနော်တို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေကြစို့” တင်ထွန်းကလည်း ဝင်ပြောသည်။ “ဟုတ်တယ်၊ ကိုယ့်ညီမအရင်းကို ရှောင်ရင် ပြီးတာပဲ” ဇော်ထက်က အန်တီမိုးကို ဖက်သည်။ ခေါင်းကို ပေါင်ရင်းနား ဖိချသည်။ အန်တီမိုးကလည်း ဟန်ဆောင်မနေတော့ဘဲ ဇော်ထက်ဘောင်းဘီကို ပါးစပ်နဲ့ ကိုက်ချွတ်လိုက်သည်။ တင်ထွန်းက ရူပါခင်ကို အားမရသေးသဖြင့် ရူပါခင်နားကပ်သည်။ မိုးဆွေက သင်းသင်းနဲ့ မိုးမိုးထံကပ်သည်။ တင်စိုးက ပိုပိုနားကပ်သည်။ သူဇာခင်က လွတ်နေရာမှ အန်တီမိုးနဲ့ ပူးပေါင်းလိုက်သည်။ နောင်တွင် အိမ်ကို လေးနာရီကွက်တိရောက်ရန် သူတို့ချိန်းကြသည်။
အားလုံး ရေချိုးအလှပြင်လာကြရန်လည်း သဘောတူထားကြသည်။ အိမ်ထဲအားလုံးရောက်သည်နှင့် ပထမဆုံး နှစ်ယောက်ပေါင်းချင်သည့် မိန်းကလေးကို ရှာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယောက်ျားလေး လေးယောက်သာ ပါပြီး မိန်းကလေးက ခြောက်ယောက်ဖြစ်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ပေါင်းသည့် အတွဲရပြီဆိုလျင် ယောက်ျားလေးများက တန်းစီ၍ ဘောင်းဘီချွတ်ထားသည်။ မိန်းကလေးများက ဒူးထောက်ကာ လီးစုပ်သည်နှင့် စသည်။ နေရာကလည်း အဝေးကြီးမသွားရ။ အခန်းထောင့်တွင်တော့ ကုတင်တလုံးချထားသည်။ စားပွဲတလုံးရှိသည်။ ကြမ်းပြင်တွင် ခင်းထားသည့် အခင်းရှိသည်။ ဆိုဖာထိုင်ခုံနှစ်လုံးရှိသည်။ လီးများစုပ်ပြီးကြသည့်နောက် အဖုတ်ယက်ကြသည်။ အဖုတ်ယက်လျင် မိမိကြိုက်သည့် ဆိုဖာ၊ ကုတင်၊ အိပ်ယာခင်းစသည့် တစ်ခုခုကို ရွေး၍ အဖုတ်ယက်ကြသည်။ ထို့နောက် ကိုယ်ကြိုက်သည့်ပုံစံဖြင့် လိုးကြသည်။
လိုးနေရင်းတန်းလန်းလည်း အခြားသူနဲ့ ပူးပေါင်းနိုင်သည်။ ဥပမာ သူဇာကို မိုးဆွေကလိုးနေရင်း သူဇာအား ဇော်ထက်လိုးနေသည့် ပိုပိုနို့သွားစုပ်ခိုင်းတာမျိုး မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ဖက်၍ ကုန်းခိုင်းတာမျိုး လုပ်နိုင်သည်။ အားလုံးလိုးပြီးနောက် သုက်ရည်ကို တယောက်တည်းပေါ်သာလျင် လွတ်ချရသည်။ သုက်ရည်ကို သင်းသင်းပေါ် လွတ်ချပြီးသည့်နောက် သင်းသင်းက မစားချင်လျင် တခြားတယောက်ကို ကျွေးနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့်တော့ အန်တီမိုးက လီးရည်များ အနစ်နာခံစားပေးတတ်သည်။ နောက်ပိုင်း လိုးပြီးနောက် စာတွေ ဘာတွေကြည့်ကြသည်။ ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်ကြလျင်တော့ တချီထပ်ဆွဲပြီး ပြန်ကြသည်။ အန်တီမိုးကလည်း သင်ပေးတတ်သည်။ မိန်းကလေးတွေဆိုတာ ဘယ်လိုထိရင် ဘယ်လိုဖြစ်တယ် ဘယ်နားကိုင်ရင် ဘာဖြစ်တယ် စသဖြင့် သင်ပေးသည်။ သူတို့ကလည်း လက်တွေစမ်းသည်။ နားသယ်များ နမ်းခြင်း အိုးကိုပွတ်သပ်ခြင်း စသဖြင့် နည်းပေါင်းစုံ သင်ကြားရသည်။
သူတို့ဆယ်ယောက်သည် အန်တီမိုးအိမ်တွင် စာကျက်ဝိုင်းအကြောင်းပြ၍ လိုးပွဲကြီးကို ညနေ ညတိုင်း ကျင်းပရင်း ဆယ်တန်းကို အောင်မြင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် တက္ကသိုလ်သို့ တက်လှမ်းကြသည့်နောက် မိန်းကလေးများက တခြားတက္ကသိုလ်ကို လျှောက်၍ သူတို့ကို ရှောင်သွားကြလေတော့သည်။ သို့သော်လည်း သူတို့မှာ အန်တီမိုး၏ အသင်အပြကြောင့် မိန်းကလေးကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမည် ကောင်းကောင်းသိသော သူတို့လေးယောက်မှာ တက္ကသိုလ်တွင်လည်း သူ့ထက်ငါ အပြိုင် မိန်းကလေးများ ပိုးကြသည်။ ပြီးတော့ သူထက်ငါအပြိုင် မိန်းကလေးများအား အပိုင်သိမ်းကြသည်။
ဘယ်ကောင်မလေးက ဘယ်လိုကောင်းသည် စသဖြင့် အပြိုင်ပြောကြရင်း ဖိုးသာထူးဆိုသည့် ဖူးကားအမြဲကြည့်သည့် ကောင်လေးနဲ့ သူတို့ဆုံဖြစ်သည်။ ဒင်းလေးဆီက ဖူးကားကူးပြီး လိုးနည်းလေးဘာလေး ရှာကြံသည်။ ထိုထက်ကံကောင်းသည်မှာ ဖိုးသာထူးကြောင့် မိန်းမတွေကို တော်တော်လေးလိုးဖူးခဲ့သော်လည်း အဆွဲ အကြမ်း အလွမ်းနဲ့ အပေးကောင်းကာ လီးကို စုပ်ယူထားသလို လိုးကောင်းလှသည့် ဝေဝေနဲ့ တွေ့ခဲ့ရသည်။ သူတို့ နောက်ကြောင်းပြန်နေချိန်တွင်ပင် ဝေဝေတယောက် ရေချိုးပြီး၍ အလှပြင်နေသည်။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ဖန်တောင့်တောင့်နဲ့ တင်းရင်းသော အိုးနှင့် ချိုသောအပြုံးနဲ့ လျှောက်လှမ်းလာနေသော ဝေဝေကို ကြည့်ရင်း ငါးယောက်သား လီးမှာ ငေါက်ခနဲ ရုန်းထသွားကြလေသည် …… ပြီးပါပြီ။
Categorized as အင်းဆက် Tagged ဆာနေကြသူများ